Ime Ihe Dị Chineke Mma—Otú Ị Ga-esi Ebi Ndụ Na-amasị Chineke ma Bụrụ Enyi Chineke | Bible Na-akụzi
1, 2. Nye ihe atụ nke ụfọdụ ndị Jehova lere anya dị ka ndị enyi ya.
6 Isi nke 11 nke akwụkwọ a kọwara otú Setan bụ́ Ekwensu si maa ọbụbụeze Chineke aka. Setan boro Chineke ebubo na ọ ghara ụgha ma nye echiche bụ́ na Jehova emezighị emezi n’ịghara ikwe ka Adam na Iv kpebiere onwe ha ihe ọma na ihe ọjọọ. Ka Adam na Iv mehiesịrị, ụmụ ha amalitekwa ijupụta ụwa, Setan kwuru na ụmụ mmadụ ejighị ezi obi na-efe Jehova. “Ndị mmadụ adịghị ejere Chineke ozi n’ihi na ha hụrụ ya n’anya,” ka Setan kwuru. “E nye m ohere, aga m emeli ka mmadụ nile gbakụta Chineke azụ.” Akụkọ banyere nwoke ahụ aha ya bụ Job na-egosi na nke ahụ bụ ihe Setan kweere. Ònye bụ Job, oleekwa otú ebubo Setan boro Chineke si gbasa ya?
8 Setan nyere echiche bụ́ na Job ejighị ezi obi na-efe Chineke. Ekwensu gwara Jehova, sị: “Ọ́ bụghị Gị onwe gị gbaworo ya [Job], gbaakwara ụlọ ya, gbaakwara ihe nile o nwere, ogige gburugburu? Ị gọziwo ọrụ aka ya abụọ, ihe nnweta ya agbasawokwa n’ala. Ma otú ọ dị, biko, setịpụ aka Gị, metụ ihe nile o nwere, ọ ghaghịkwa ịgbakụta Gị azụ n’ihu Gị.”—Job 1:10, 11.
16 Dị ka a tụlere n’Isi nke 10 n’akwụkwọ a, Setan na-eji ụzọ dịgasị iche iche eme ka ndị mmadụ gbakụta Chineke azụ. N’otu akụkụ, ọ na-awakpo mmadụ “dị ka ọdụm na-ebigbọ ebigbọ, na-achọ onye ọ ga-eripịa.” (1 Pita 5:8) N’ihi ya, a pụrụ ịhụ aka ọrụ Setan mgbe ndị enyi, ndị ikwu, ma ọ bụ ndị ọzọ na-emegide mgbalị ị na-eme ịmụ Bible na itinye ihe ndị ị na-amụta n’ọrụ. * (Jọn 15:19, 20) N’aka nke ọzọ, Setan ‘na-anọgide na-enwogha onwe ya ịbụ mmụọ ozi nke ìhè.’ (2 Ndị Kọrint 11:14) Ekwensu pụrụ iji ụzọ aghụghọ duhie gị ma mee ka ị kwụsị ibi ndụ n’ụzọ na-amasị Chineke. Ọ pụkwara iji nkụda mmụọ mee ihe, ikekwe na-eme ka i chee na i rughị eru ime ihe na-amasị Chineke. (Ilu 24:10) Ma Setan ọ̀ na-eme ka “ọdụm na-ebigbọ ebigbọ” ma ọ̀ na-eme onwe ya “mmụọ ozi nke ìhè,” ihe o kwuru agbanwebeghị: Ọ na-ekwu na ọ bụrụ na ule na ọnwụnwa abịara gị, ị ga-akwụsị ijere Chineke ozi. Olee otú ị pụrụ isi nye azịza maka ihe ịma aka a ma guzosie ike n’ezi ihe nye Chineke, dị ka Job mere?
18, 19. (a) Olee ihe ụfọdụ Jehova nyere n’iwu? (Lee igbe dị na peeji nke 122.) (b) Olee otú anyị si mara na Chineke adịghị achọ ka anyị mee ihe anyị na-agaghị emeli?
18 Olee ihe ndị Jehova nyere n’iwu? Ụfọdụ n’ime ha gụnyere omume ndị anyị na-aghaghị izere. Dị ka ihe atụ, lee igbe dị na peeji nke 122, nke isiokwu ya bụ “Zere Ihe Ndị Jehova Kpọrọ Asị.” N’ebe ahụ, ị ga-ahụ omume ndị e depụtara, bụ́ ndị Bible katọrọ n’ụzọ pụtara ìhè. I lee ha anya na nke mbụ ya, omume ụfọdụ e depụtara n’ebe ahụ pụrụ iyi ka hà adịchaghị njọ. Ma mgbe ị tụgharịsịrị uche n’akụkụ Akwụkwọ Nsọ ndị a kpọtụrụ uche, o yikarịrị ka ị̀ ga-ahụ amamihe dị n’iwu Jehova. Ime mgbanwe n’omume gị pụrụ ịbụ ihe ịma aka kasịnụ i nwetụworo. N’agbanyeghị nke ahụ, ibi ndụ n’ụzọ na-amasị Chineke na-eweta afọ ojuju na obi ụtọ dị ukwuu. (Aịsaịa 48:17, 18) Ị ga-emelikwa ya. Olee otú anyị si mara?
19 Jehova adịghị achọ ka anyị mee ihe anyị na-agaghị emeli. (Deuterọnọmi 30:11-14) Ọ maara ihe ndị anyị pụrụ ime na ihe ndị anyị na-apụghị ime karịa ka anyị maara. (Abụ Ọma 103:14) Ọzọkwa, Jehova pụrụ inye anyị ume iji rubere ya isi. Pọl onyeozi dere, sị: “Chineke na-ekwesị ntụkwasị obi, ọ gaghịkwa ekwe ka a nwaa unu gabiga ihe unu pụrụ ịnagide, kama mgbe ọnwụnwa ahụ bịara ọ ga-emekwa ụzọ mgbapụ ka unu wee nwee ike idi ya.” (1 Ndị Kọrint 10:13) Iji nyere gị aka ịtachi obi, Jehova pụrụ ọbụna inye gị “ike karịrị ike nkịtị.” (2 Ndị Kọrint 4:7) Mgbe Pọl tachisịrị obi n’ọtụtụ ọnwụnwa, o kwuru, sị: “Maka ihe nile enwere m ume site n’onye ahụ nke na-enye m ike.”—Ndị Filipaị 4:13.
20 N’ezie, ime ihe na-amasị Jehova gụnyere ihe karịrị izere ihe ndị ọ kpọrọ asị. Ọ dịkwa mkpa ka ihe ndị na-amasị ya na-amasị gị. (Ndị Rom 12:9) Ọ̀ bụ na ọ dịghị amasị gị ka ndị na-eche echiche otú i si eche, ndị ihe na-amasị gị na-amasị, nakwa ndị ụkpụrụ gị na ha bụ otu bụrụ ndị enyi gị. Ọ na-amasịkwa Jehova ka ndị dị otú ahụ bụrụ ndị enyi ya. N’ihi ya, mụta inwe mmasị n’ihe ndị na-amasị Jehova. A kọwara ụfọdụ n’ime ha n’Abụ Ọma 15: 1-5, bụ́ ebe anyị na-agụ banyere ndị Chineke lere anya dị ka ndị enyi ya. Ndị enyi Jehova na-amịpụta ihe Bible na-akpọ “mkpụrụ nke mmụọ nsọ.” Ọ gụnyere àgwà ndị dị ka “ịhụnanya, ọṅụ, udo, ogologo ntachi obi, obiọma, ịdị mma, okwukwe, ịdị nwayọọ, njide onwe onye.”—Ndị Galeshia 5:22, 23.
Ịkpọ ma ọ bụ ịra ụtaba, ise siga, ma ọ bụ iji ihe ndị a sị na ha bụ ọgwụ ndị e ji atụrụ ndụ eme ihe.—Mak 15:23; 2 Ndị Kọrint 7:1.
^ par. 16 Nke a apụtaghị na ọ bụ Setan kpọmkwem na-edunye ndị na-emegide gị. Ma Setan bụ chi nke usoro ihe a, ụwa dum dịkwa n’ike aka ya. (2 Ndị Kọrint 4:4; 1 Jọn 5:19) Ya mere, anyị pụrụ ịtụ anya na ibi ndụ n’ụzọ na-amasị Chineke agaghị amasị ọtụtụ ndị, ụfọdụ ndị ga-emegidekwa gị.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Ibi Ndụ n’Ụzọ Na-amasị Chineke
bh isi 12 p. 115-124